Dhowr isticmaale ayaa wali isticmaalaya noocii hore ee Tweetbot, sidee u sameeyaan? | Wararka IPhone
Hagaag, way fududahay iyo inta badan adeegsadayaashani leedahay cusbooneysiin otomaatig ah oo ku kaydsan App Store oo sidaas awgeed waxay weli ku dhegan yihiin nooca 4.8.3 ee macmiilka caanka ah ee Twitter-ka. Waxa ay isku dayayaan inay sameeyaan ayaa ah inay ka fogaadaan dhibaatada ama "musiibada" noocii ugu dambeeyay ee 4.9 ee la sii daayay Ogosto 16, laakiin ma jirto wado looga baxsan karo.
Xaqiiqdii, cusbooneysiinta otomaatigga ah maahan wax ku cusub qaar badan oo ka mid ah dadka isticmaala Apple, waana sababta oo ah inaad si otomaatig ah u cusbooneysiiso codsiyada, buugaagta iBooks, Muusikada ama nidaamka cusbooneysiinta, khaladaadka qaar ka mid ah horumariyeyaasha ayaa la cunay markii la bilaabay nooc cusub ama barnaamij.
Ka fogaanshaha cusbooneysiinta otomaatiga ah waa suurtagal
Apple wuxuu noo ogolaanayaa inaan sameyno iyadoon casriyeyn otomaatig ah on our iPhone, iPad, iPod Touch iyo Mac haddii aan rabno. Si tan loo sameeyo waxaan si fudud ku qasbanaaneynaa inaan raacno dhowr tallaabo barnaamijyadana mar dambe si otomaatig ah looma cusbooneysiin doono, waa inaan mas'uul ka noqonnaa gelitaanka App Store iyo riixitaanka batoonka cusbooneysiinta. Aan aragno sida loo joojiyo cusbooneysiinta otomaatiga ah ee ku saabsan iPhone, iPad, ama iPod taabashada:
Guji Guji> [magacayaga]> iTunes Store iyo App Store
Ka hawlgeli ama barkinta xulashada Cusboonaysiinta si aad toos ugula soo degto
Ka dib markii la joojiyay hawsha Cusbooneysiinta, gudaha miisaska soo dejinta otomaatiga ah qalabkeenu si otomaatig ah uma cusbooneysiin doono barnaamijyada. Dhinaca kale, tani waxay yeelan kartaa qodobo taban. Muhiimadu waxay tahay waa inaan gacanta ku cusbooneysiinaa dhamaan barnaamijyada mana ogaanayno ilaa aan ka galno App Store si aan u raadino barnaamij ama wax lamid ah.
Xilligaas markaan galno App Store Buufin cas ayaa u muuqata tabka wararka cusbooneysiinta oo leh tirada barnaamijyada aan ku cusbooneysiin doonno, ikhtiyaar ayaa ka muuqda xagga sare oo oggolaanaya "Cusboonaysii dhammaan" ama mid mid baan u samayn karnaa. Xaaladaha marka cusbooneysiinta barnaamijku ay tahay sababo nabadgelyo, waxaa hubaal ah in lagugula taliyo inaad sida ugu dhakhsaha badan u cusbooneysiiso
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Dukaanka App » Dhowr isticmaale ayaa wali isticmaalaya noocii hore ee Tweetbot, sidee u sameeyaan?
Garcia Randy dijo
Maxay leedahay haysigii hore ama kan cusubi inuu ku sameeyo? Ikhtiyaarrada ayaa u istaagay inay u shaqeeyaan sidaad rabto. Tani maahan nooca, laakiin waxay ku saabsan tahay API-da 'Twitter'.
Waxaan hayaa qaabkii hore wax walbana way joojiyeen inay shaqeeyaan.
Ma garanayo, laakiin qodobkani waa mid aan sal lahayn: ma jirin wax baadhitaan ah.
Jawaab Randy Garcia